विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिङ नै किन ? | Citizen Post News
कुलमान घिसिङ वि.सं.२०२९ मंसिर १० गते बुधबार रामेछाप जिल्लाको दुर्गम गाउँ बेथानमा जन्मिएका हुन् । उनले काठमाडौंको अमर आदर्श माध्यामिक विद्यालयबाट १९८६ मा एस्.एल्.सी उतिर्ण गरेका हुन् भने लैनचौरको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइ.ए.सी.गरेका हुन् ।
रिजनल ईन्ष्टिच्यूट अफ ईन्जिनियरिङ जम्सेदपुर भारतबाट १९९४ मा बीएससी डिग्री इन ईन्जिनियरिङ गरेका उनले ईन्ष्टिच्यूट अफ ईन्जिनियरिङ पुलचोकबाट २००३ मा पावर सिस्टम ईन्जिनियरिङमा मास्टर डिग्री गरेका थिए । उनले पुनः २०११ मा एस ईन्ष्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्टबाट एम.बी.ए.सम्मको अध्ययन गरे ।
घिसिङले करिब दुई दशकभन्दा बढी समय विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित भएर काम गर्दै आएका थिए । उनी विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपूर्व राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आयोजना प्रमुख (प्रोजेक्ट चिफ) को रुपमा कार्यरत थिए । उनले चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमेटेडको प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा पनि काम गरिसकेका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय व्यक्तिहरुलाई नेपालमै पहिलो पटक स्थानीयलाई शेयर प्रदान गरी आयोेजनामा अपनत्वको विकास गराएका थिए । उनी प्राधिकरणमा रहँदा गरेका कामको सफल कार्यको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । घिसिङले प्राधिकरणको ग्रामिण विद्युतीकरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना प्रमुखसम्म भएर काम गरेका थिए ।
समस्या पहिचान र समाधान:
घिसिङसंग विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण र विद्युत वितरणका साथै व्यापारिक व्यवसायमा पनि करिब दुइ दशकभन्दा लामो अनुभव छ । जसले जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्झौता व्यवस्थापन र विवाद समाधान हुन्छ । नेपालमा धेरै मन्त्रीहरु फेरिए । तर लोडसेडिङ 'जिउँ कोे तिउँ' थियो । धेरै मन्त्रीहरुको कार्यकालमा लोडसेडिङ बीसको उन्नाइससम्म पनि भएको थिएन ।
नेपालमा लोडसेडिङको ठूलो समस्या थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रखर र खरो स्वभाव भएका व्यक्ति जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई उर्जा मन्त्रीमा मनोनित गरे । जनार्दन शर्मा त्यतिवेला व्यवस्थापिकाको लेखा समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहेका थिए । शर्माले उर्जा मन्त्रीको पदभार सम्हाले । घिसिङले चिलिमे जलविद्युतमा काम गरेको उर्जामन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री दाहालले नजरअन्दाज गरिरहेका थिए ।
शर्मा उर्जामन्त्री भएको केही दिनमै दुरदृष्टि भएका जुझारु, कर्मठ र निडर व्यक्ति घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा अनुमोदन गरे । धेरै बरिष्ठ सम्भावित उम्मेदवारहरुलाई पछि पार्दै घिसिङ सेप्टेम्बर १४, २०१६ मा विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्त भए । घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यभार सम्हाल्न सहज चाँही पक्कै पनि थिएन ।
विभिन्न उल्झनहरु नभएका पनि होइनन् । उनलाई असफल पार्नको निमित्त विद्युत माफियाहरुले न्वरानसम्मको शक्तिको रोल प्ले गरे । विद्युत माफियाहरुले घिसिङलाई पछार्न साम, दाम, दण्डभेद सबै प्रकारका अस्त्रहरु प्रहार गरे । तर उनले सबैलाई पराजित गरेरै छाडे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा वर्षौसम्म काम गरिसकेका घिसिङ संगठनको आन्तरिक मेकानिकबारे सचेत थिए ।
रोचक कुरा त के भने घिसिङले पुलचोक ईन्जिनियरिङ कलेजबाट ‘इन्ट्रिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ वीथ डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ मा थेसिस गरेका थिए । घिसिङको लागि अर्को थप प्लस पोइन्ट यो पनि थियो । घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक हुँुुनुपूर्व जनताले दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको चर्को भार खेप्न बाध्य थिए । घिसिङ नियुक्ति भएको एक महिनापछि देश भरका घरहरुमा निर्वाध बिजुली बत्ति आपूर्ति गर्नका लागि उनको टिमले ठूलो चुनौतिको सामना गर्न पर्यो ।
किनकी त्यो दिन नेपालीहरुको महान चाड लक्ष्मी पुजा थियो ।
लक्ष्मी पुजालाई उज्यालो चाड पनि भनेर चिनिन्छ । लक्ष्मी पुजाको दिन सबै देशबासीहरुले घर घरमा बत्ती बालेर झिलिमिली बनाउने गरिन्छ । लक्ष्मी पूजाको दिन अन्य दिनभन्दा बढी विजुलीको माग हुने गर्दछ । घिसिङ कसरी काठमाडौंबासीलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ भनेर काठमाडौंको स्यूचाटारमा रहको लोड डिस्प्याच केन्द्रमा आफैं बसेर विद्युत आपूर्ति गराइरहे । घिसिङको परिवारले उनको अनुपस्थितिमै लक्ष्मी पूजा गरेका थिए ।
लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र ४०४ मेगावाट विजुली आपूर्ति गराएका थिए । वषौं वर्ष अन्धकारमा लक्ष्मी पूजा गर्न बाध्य जनता घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएपछि झिलिमिली उज्यालोमा लक्ष्मी पूजा गर्न पाउँदा सामाजिक सञ्जाललगायत छापा मिडियामा ठूलाठूला अक्षरमा घिसिङको जयजयकार छापियो ।
घिसिङ नेपाली अँध्यारो आकाशमा उज्यालो सूर्य बनी उदाय । घिसिङले अँध्यारोमा बानी परी सकेका मानिसहरुलाई उज्यालोको स्वाद चखाए भने बाह्रैमास औंशीको त्यो कालो रात कता गयो खै, पूर्णिमा बनी घिसिङ आए घर-घरमा दिपावली मनाए । भित्री मनदेखिनै सबैले घिसिङको जयजयकार गाए । कुलमान वास्तवमै कुलकै मान राख्न सफल उज्यालो सूर्यको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्तिको रुपमा चिनिए ।
टुकी मूनिको अँध्यारोमा बस्न विवश नेपाली जनता यतिबेला उज्यालोमा बस्न पाएका छन् । यसको श्रेय घिसिङ, तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रम दाहाललाई दिन कन्जुस्याइ गर्न हुँदैन । वास्तवमा विद्युतको खपत माग र पूर्तिको सन्तुलनले निर्धारण गर्दछ । वितरण प्रर्णालीमा रहेको कमी कमजोरीमाथि राम्रो दख्खल राख्ने घिसिङले विद्युतको वितरण प्रर्णालीको राम्रैसंग स्क्यानिङ गरे ।
मुलुकमा सबैभन्दा बढी पिक आवरमा हुने हाइ डिमाण्ड त्यसको ड्यूरेसन, देशमा आपूर्ति भइ रहेको विद्युतको क्षमता, कुल माग भइरहेको विद्युतको क्षमता र माग र पूर्ति विचको फरकलाई राम्रोसँग केलाएर घिसिङले कार्य योजना बनाए । २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत चुहावट भएको निस्कर्ष पनि घिसिङलेनै निकाले । उनको ठूलो सफलता चुहावट नियन्त्रण पनि एक हो ।
मुलुकमा उत्पादन भएर नपुग भएको विद्युत भारत सरकारसँग समन्वय गरी अविच्छिन्न रुपले प्रवाह भइरहने व्यवस्था मिलाए । यी तमाम विषयहरुमा दैनिकी तालिकानै बनाएर काम गरे । विवादास्पद स्थानहरुमा घिसिङ स्वयम् उपस्थित भई स्थानीयहरुसंग छलफल गरी वषौंं वर्षदेखि गिजोलिएको समस्याहरुलाई समााधान गरे । निर्माण भइरहेका प्रशारण लाइनहरुलाई तिब्रता दिन, हौसला प्रदान गर्न मध्यरातसम्म आफै खटिए ।
घिसिङले ग्राहस्थ उपभोक्ताहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विद्युत वितरण गर्ने नीति अनुरुप डेडिकेटेड फिडरमार्फत वितरण भइरहेको एकलौटी र असन्तुलित विद्युत प्रवाहलाई रोकिदिए । जसको फलस्वरुप आम उपभोक्ताहरुको घरघरमा विद्युत प्रवाह बढ्न गई दशकौं दशकदेखि बत्ती मूनीको अँध्यारोमा बसेका मानिसहरुको मुहारमा खुसीको दीप प्रज्वलन भई चम्किलो ताराको रुपमा ३ करोड मानिसहरुको मन मुटुमा बस्न सफल भए ।
हिजो आज मानिसहरु भन्ने गर्छन्, बत्ति जाँदा कुलमान गयो, बत्ती आउँदा कुलमान आयो । वास्तवमा सुन्दा खेरी यो वाक्य ठट्टा जस्तै सुनिए पनि यसमा गहिरो भाव लुकेको छ । घिसिङले उर्जा क्षेत्रमा जोडिएको संकटलाई निर्मुल पार्ने कोसिस गरेका छन् । घिसिङले २०७३ चैत्र १ गतेबाट नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भए । घिसिङ सुनौलो अक्षरमा आफ्नो नाम लेख्न पनि सफल बने ।
घिसिङ प्रवन्ध निर्देशक हुनुपूर्व १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो भने बाँकी रहेको ६ घण्टामा पनि पटक-पटक बत्ति जान्थ्यो । हप्तैपिच्छे लोडसेडिङ तालिका परिवर्तन हुन्थ्यो । मानिसहरु यसैमा बानी परिसकेका थिए । विद्युत आपूर्ति नहुँदा उद्योग, कल कारखाना दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएका थिए । वर्षा याममा समेत दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्न बाध्य जनताहरुले यो देशमा लोडसेडिङको अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा नै मारिसकेका थिए ।
घाटाको बिजुली ब्यापार अन्त्य:
३ करोड नेपालीले पत्याएका र ४८ महिने आफ्नो कार्यकालमा करिब बार्षिक ८ देखि ९ अर्वको हाराहारी घाटामा गएको र सञ्चित घाटा पनि करिब ३४ अर्व ६१ करोड रहेको पेरिफेरीमा वार्षिक ११ अर्व ५ करोड नाफा दिई सञ्चित घाटा पनि अन्त्य गराए उनले । प्राधिकरणले तथ्याड्ढ अनुसार चार वर्षमा प्राधिकरणको विद्युत पहुँच ६३ प्रतिशतबाट बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ भने नेपालभर ४० लाख उपभोक्ता रहेका छन् ।
दैनिक अन्धकारमा बस्ने जनताहरु घिसिङले प्राधिकरको जिम्मेवारी सम्हालेको ३ वर्षमै लोडसेडिङको लामो सूचनाको बदला जति सकिन्छ विद्युत खपत गरौं भन्ने सूचना आयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि घिसिङको कार्यकाल इतिहासकै स्वार्ण युग बन्योभन्दा पनि फरक पर्दैन । उनी प्राधिकरणको एउटा कुशल व्यवस्थपकको रुपमा पनि स्थापित भए ।
तर, घिसिङलाई एउटा आँखाले पनि देख्न नसक्नेहरुले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप प्रत्यारोप पनि लगाए । तर एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको भए मलाई झून्ड्याए हुन्छ भन्ने घिसिङको अभिव्यक्तिले सारा नेपालीहरुको मन छोयो । घिसिङले भनेका थिए आरोप लगाउने मात्र हैन प्रमाण देखाउन आग्रह गरे । घिसिङले सम्भव छ भन्ने भनाईलाई पुष्टि गरेर देखाइसकेका छन् ।
कुलमान घिसिङ नै किन ?
देशभर भइरहेको विद्युत संकटलाई जरैदेखि उखलेर निर्मूल पार्न सफल उज्यालो सूर्य भनेर राष्ट्रपति विद्याभण्डारीबाट प्रवल जनसेवाश्री पदकलगायत थुप्रै संघ-संस्थाहरुबाट पदक र मान-सम्मानहरुबाट सम्मानित घिसिङले समग्र घिसिङको मात्र नभई विश्वसामु मुलुककै मान राख्न सफल भए । एक भोट पनि नल्याएका व्यक्तिहरु यो देशको मन्त्री बन्न सक्छ, दुई दुई पटक चुनाब हारेको व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।
१८ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य जनमानसको मनमुटुमा बस्न सफल नेपालको अँध्यारो आकाशको उज्यालो सूर्य बनी उदाएका घिसिङ 'नेपालको सान, कुलको मान' कुलमान घिसिङलाई अर्को कार्यकाल थप गर्न किन नहुने ? श्रृष्टी बदल्नु पूर्व आफ्नो दृष्टी बदलौं । हाम्रो मान्छेलाई होइन, राम्रो मान्छेलाई अवसर दिऔं । सकरार सत्ता, शक्ति, सम्पति, समय, रुप बैंस क्षणिक छ ।
जीवन पाउनु भनेको भाग्यको कुरा हो, मृत्यु हुनु समयको कुरा हो तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मन मुटुमा जिवित रहनु भनेको चाँही असल कर्मको कुरा हो । त्यसैले जीवन रहुन्जेल सत्कर्म गरौं । म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सरकार अहिले मन्दिरमा होइन, घरमा बत्ति बाल, घरमा बाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो मनमा बत्ति बाल ।
हामीले जीवनमा मैनबत्ती बनेर होइन, ट्यूबलाइट बनेर बाँच्नुपर्छ । अहिलेको प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकाको लागि कुलमान घिसिङ बाहेक अरुलाई सोच्दै नसोचौं । यसैमा लोकको हित हुनेछ । लेखकः प्रदिप घिमिरे ‘अमूल्य’ युवा समाजसेवी, मन्थली न.पा. ४ सालु रामेछाप